No Velocity – College, Isiokwu, edemede & malitegharịa, Writing Atụmatụ
5nke March, 2018 Sankashti Chaturthi Moonrise Time In India Sankashti Chaturthi or Sankatahara Chaturthi or Sankat Nivaran Chaturthi is an auspicious day dedicated to Lord Ganesha, also known as Ganpati who is son of Lord Shiva and Goddess Parvati. Sankashti is celebrated on the Chaturthi (4th day) of the Krishna Paksha (dark lunar phase) of…
Sridevi edemede, biography, Profaịlụ, Family, Super-hit Movies, Demise Sridevi’s evolution over the years. Gbagburu Gautamji ọzọ. Edemede a na e dere ọtụtụ afọ gara aga, azụ na Sept 1994 ma bụ dị ka ezi taa. Essay on Sridevi “M na-eche nnọọ obi ụtọ mgbe mmadụ nile na-akpọ m nọmba otu kpakpando.” ('85) “Echeghị m na m ruru n'elu.”…
Delhi bụ otu n'ime ihe anọ ahụ isi mepere obodo India. Na-ebi-amụba nọmba nke IT ụlọ ọrụ, ụlọ mmepụta ihe na, ụlọ ọrụ na anoghi n'ulo oba, Delhi pụta dị ka otu n'ime ndị isi izi na ọrụ n'ógbè nlekọta ọrụ. University of Delhi bụ ewu ewu nile India n'ihi na ya muta ụkpụrụ. Na osisi ule gburugburu akụkụ, students from…
World AIDS Day – December 1, 2017 : edemede, isiokwu, slogans, Quotes, ozi, Olee otú Agba, Speech World aids day is celebrated every year all over the world on 1st of December to raise the public awareness about AIDS (Enwetara Immuno Erughi ọrịa). AIDS is a pandemic disease caused due to the infection of Human Immunodeficiency…
-Achọ otú dee a Letter na nchịkọta akụkọ pụta ìhè n'okporo ámá na okporo ụzọ nsogbu enwe mmiri na-egbu osisi n'oge udu mmiri? Lee, anyị bụ na a Letter na nchịkọta akụkọ banyere mmiri na-egbu osisi nsogbu n'oge udu mmiri na Metro obodo ndị dị ka Delhi. Letter na nchịkọta akụkọ banyere mmiri na-egbu osisi nsogbu n'oge udu mmiri 1065/20 Tri Nagar Delhi-110035…